बोक्सी आरोपमा बर्बरता - Hamro Bulletin
शनिबार १५, कार्तिक २०७७ ०१:१७
बोक्सी आरोपमा बर्बरता
हाम्रो बुलेटिन शुक्रबार, १६ असोज २०७७
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–३ की धनहीरा राईले बोक्सी आरोप लगाउँदै निर्घात कुटपिट गरेकी महिला चोट देखाउँदै र घटनास्थलमा भेला भएका स्थानीय बासिन्दा। कुटपिटमा प्रयोग गरिएको त्रिशूल धनहीराको पूजा कोठाबाट नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी। तस्बिर : किशोर बुढाथोकी
विराटनगर : मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–३ आइतबारेमा नौ दिनअघि नयाँ धामी उत्रिएको हल्ला फैलियो। २९ वर्षीया धनहीरा राई मंगलबार राति घरमा चिन्ता (धामी) बस्ने कुरा चलेपछि छरछिमेकी भेला भए। स्थानीय एक ३८ वर्षीया महिला पनि सीमा जोडिएको उक्त घरमा चिन्ता बसेको हेर्न गइन्।
‘शरीरमा धामी उत्रिएको’ भन्दै धनहीरा थाल ठटाएर घरको बरण्डामा चिन्ता बसिरहेकी थिइन्। त्यही घरको कोठामा बसेर झ्यालबाट चिन्ता हेरिरहेकी ती महिलालाई उनले एक्कासि बोक्सी आरोप लगाइन्। चिन्ता बसेको ठाउँमा जथाभावी गर्दै ‘बोक्सीको तन्त्रमन्त्र लगाएर धामीविद्यामा असर पुर्‍याएको’ भन्दै धनहीरा जाइलागिन्।
‘आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै पीडित महिलाले चिन्ताको थानमा पुगेर माफी मागिन्’, एक स्थानीयले भने, ‘तर, धनहीराले थानमा चिन्ता बस्दा प्रयोग गरेको त्रिशूल उठाएर धनहीराले प्रहार गर्न थालिन्।’ केही स्थानीयले उक्त घटनाको भिडियो खिचे। उक्त भिडियोमा पीडितलाई बोक्सी आरोप लगाउँदै एकोहोरो त्रिशूलले कुटपिट गरिरहेको देख्न सकिन्छ। बोक्साबोक्सीजस्तो अन्धविश्वासलाई कानुनले दण्डनीय बनाए पनि समाजबाट उन्मूलन नभइसकेको यो घटनाले देखाएको छ।
एक स्थानीयका अनुसार अरूले नछुट्ट्याएको भए पीडितको ज्यानै जान सक्थ्यो। घटनामा पीडितले भने प्रतिवाद गरिनन्। चिन्ता हेर्न भेला भएकामध्ये अधिकांशले घटना रोक्नुपर्नेमा उल्टै ‘गल्ती गर्नेलाई यसै गर्नुपर्छ’ भन्दै धनहीराको समर्थन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालका अनुसार धनहीराले त्रिशूलले प्रहार गर्दा, घोच्दा तथा अगुल्टोले बारम्बार हान्दा पीडितको शरीरभर चोट लागेको छ। मंगलबार साँझदेखि चिन्ता बसेकी आरोपित महिलाले पीडित महिलालाई बुधबार बिहान ४ः३० बजेतिर बोक्सी आरोप लगाउँदै चरम यातना दिएको खुलेको ढकालको भनाइ छ। ‘एक निरीह महिलामाथि बर्बर यातना दिँदै निर्घात कुटपिट गरेको भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘घटनाबारे थप बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ।’
पीडितलाई घोप्टो पारी आँगनमा बलिरहेको आगोमा समेत हाल्न खोजिएको स्थानीयको भनाइ छ। ‘आगोमा हाल्न खोजेपछि हामीले रोक्यौं’, एक स्थानीयले भने, ‘नभए सबै शरीर जल्ने थियो।’
प्रहरीका अनुसार त्रिशूलले छेडेको, प्रहार गरेको र अगुल्टोले बारम्बार हानिएकी पीडितको शरीरभर नीलडाम र चोट छ। निधार, दुवै पाखुरा, हत्केला, पेट, दुवै खुट्टा, घुँडा, अनुहार, कुम सबैतिर चोट रहेको ढकालले सुनाए। पाखुरा र कुममा आगोले पोलेको चोट छ। उनका अनुसार छेडेर चोट लागेका ठाउँबाट धेरै रगत पनि बगेको पाइयो।
कुटपिटबाट घाइते महिला बुधबार दिनभर ओछ्यानमै थला परेकी थिइन्। कुटपिटको भिडियोसहित पीडित पक्ष बिहीबार बिहान प्रहरी कार्यालय पुगेपछि घटना बाहिर आएको हो। पीडित पक्षले किटानी जाहेरी दिएसँगै आरोपित धनहीरालाई प्रहरीले बिहीबारै नियन्त्रणमा लिएको छ।
पीडितका श्रीमान्ले घटना थाहा पाएपछि आफू कान्छी श्रीमतीसहित बुधबार साँझ घर आइपुगेको सुनाए। ‘मलाई बुधबार बिहान ९ बजेतिर श्रीमतीले घर आउनू–आउनू भन्दै फोन गरिन्। तर घटना खुलाइनन्’, उनले भने, ‘दिउँसो छरछिमेकीले फोन गरेर सुनाए। त्यसपछि हामी घर आइपुगेर हेर्दा अवस्था दर्दनाक रहेको पायौं।’ उनले घटनाको भिडियो प्रहरीलाई बुझाइएको सुनाए। उनकी कान्छी श्रीमतीले पीडित महिलाको स्याहार गरिरहेकी छन्। दुवै जनाले पीडितलाई उपचारका लागि बिहीबार उर्लाबारीको मंगलबारे अस्पताल पुर्‍याए।
पीडितका श्रीमान्ले सिमाना जोडिएका छिमेकीसँग रिसइबी नभएको बताए। ‘छिमेकमा मिलेरै बसेका थियौं। आजसम्म ठूलो बोली पनि भएको थिएन’, उनले भने, ‘तर बर्बर यातना दिएको घटनाले छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु। यो अमानवीय घटनाले दुःखी र त्रसित बनाएको छ।’ प्रहरीले घटनामा प्रयोग गरिएको त्रिशूल बरामद गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक ढकालले कुटपिटमा संलग्न महिलाविरुद्ध बोक्सी आरोपको कसुरमा कारबाही अघि बढाउन घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। यस्तो घटना हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ।
पीडित महिला घरमा देवरका ८ वर्षीय छोरासहित बस्दै आएकी छन्। उनीपट्टिकी छोरीको बिहे भइसकेको छ। पारिवारिक सल्लाहमै श्रीमान्ले तीन वर्षअघि दोस्रो बिहे गरेको जनाइएको छ। उनी कान्छी श्रीमतीसहित झापाको सुरुंगामा बस्दै आएका छन्।
कोही त्रसित, कोही पीडककै पक्षमा
धनहीरा आफ्नो शरीरमा धामी उत्रिएको भन्दै एक सातासम्म केही पनि नखाई र कोहीसँग पनि नबोली कोठामा गुप्तबास बसेको जेठानी सविता राईले सुनाइन्। बिहान उठेर नुहाइधुवाइबाहेक उनले केही पनि नगरेको सविताको भनाइ छ।
‘निराहार तपस्याबाट शरीरमा कुल देउता भित्रिए’, उनले भनिन्, ‘त्यही देउताले दुःख दिनेलाई देख्न नसकेको हाम्रो बुझाइ छ।’ देवरानीले देउता हिँड्ने बाटोमा छेकेर अवरोध गर्ने गरेका कारण त्रिशूल हानेको आफूलाई बताएको उनको भनाइ छ। ‘आफ्नै घरमा बसेको भए हुन्थ्यो। चिन्ता बसेको अर्काको घरमा आएर घटना भयो भन्नु सान्दर्भिक हैन’, स्थानीय बलदेव राईले पीडितप्रति लक्ष्य गर्दै भने, ‘गल्ती नगरेको भए चिन्ता बसेको थानमा गएर किन ढोग्दै माफी माग्नु ? गल्ती गरेको सजाय देउताले दिएको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’ तर, कुटपिट अति नै हुन थालेपछि र आगोमै हाल्न खोजिएपछि भने छुट्ट्याएको उनको भनाइ छ।
बिहीबार दिउँसो घटनास्थलमा पुग्दा घटना हुनुमा पीडितकै गल्ती देखाउने स्थानीय धेरै देखिएका थिए। केही स्थानीय र बालबालिका घटना सम्झिएर त्रसित देखिन्थे। एक स्थानीयले भने अझै बोक्सीको कुसंस्कार कायमै हुँदा यस्ता अन्धविश्वासले समाजलाई माथि उठ्न नदिने बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट
क्लिन फिड लागू भएसँगै केवल टेलिभिजनको मूल्य वृद्धि : आइपीएल आजबाट हेर्न पाइने, इपीएल कहिले देखि ?
न सपिङ न तडकभडक, कलाकारको दसैँ
किन लगाउँछन् मंगोलले सेतो र आर्यले रातो टीका ?
‘बेचिनबाट धेरै पटक जोगिएर फर्केँ ’
पसलमै बसेर दिन बिताउँछन् भारतबाट फर्केकाहरु
धनगढीको गुरुकुल एकेडेमी तेस्रो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय पुरस्कार द्वारा सम्मानित
भारतबाट ल्याएको अवैध मल कंचनपुर प्रहरीद्वारा बरामद
कब्रिस्तानमै बन्देज लगाएपछि मृतकका आफन्त भन्छन् : भोलिसम्म निकास नआए जे पनि हुन सक्छ
यि हुन दशैँमा टीका लगाउँदा आशीर्वाद दिँदा भनिने श्लोकका विशेषता
दशैँ को बिचमा पनि कांग्रेस रामारोशन बाढी पिडित लाई राहत वितरण व्यस्त
बलिउड गायिका नेहा कक्कर आज विवाह बन्धनमा बाँधिदै